SULDAAN MAXAMED SULDAAN XIRSI QANI OO SI MAAMUUS LEH LOOGU SOO DHAWEEYEY MAGAALADA BIRMINGHAM EE DALKA INGIRIISKA | WWW.SOMALILAND.NO
SULDAAN MAXAMED SULDAAN XIRSI QANI OO SI MAAMUUS LEH LOOGU SOO DHAWEEYEY MAGAALADA BIRMINGHAM EE DALKA INGIRIISKA
Birmingham(sl.no) 18 june 2008 – Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani, oo beryahanba ku hawlanaa kulamo isdaba joog ah iyo booqashooyin, ayaa si Milgo iyo Maamuus leh loogu soo dhaweeyey Magaalada Birmingham oo ah caasimadda 2aad ee Boqortooyada Carriga Ingiriiska halkaas oo ay Jaaliyadda Somaliland oo isku duubani ku martiqaadeen Suldaanka Wiigii hore.
Suldaanka oo laga soo gelbiyey magaalada Bristol wuxuu soo gaadhay magaalada Birmingham markay goor sheegtu ahayd 2.30pm, amintaas oo toos loo geeyey madashii loogu talo galay oo ahayd meel aad u qurux badan oo ay soo camireen xubno qusuusi ah oo lagu marti qaaday inay ka soo qayb galaan munaasabadda lagu soo dhawaynayo Suldaanka Beelaha Habar Yoonis, Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani.
Mudane Cabdiraxmaan Saalax oo ahaa Xidhiidhiyaha Munaasabadda ayaa ka xog waramay habka iyo hanaanka xafladdu u socon doonto oo uu ku bilaabay erayo kooban oo uu ku soo dhawaynayo Suldaanka iyo mahad celin marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda. Intaa ka dib wuxuu ku wareejiyey hadalkii Sheekh Maxamed Baaruud oo wacdi aad u qiimo badan iyo Quraan ku furay munaasabadda.
Mudane Yuusuf Tarabi oo ku hadlayey magaca Jaaliyadda Somaliland ee Birmingham iyo ka Msuuliyiinta soo diyaarisay xafladda ayaa isaguna hadal qiimo leh oo uu ku soo dhawaynaye Suldaanka madasha ka soo jeediyey.
Mudane Maxamed Jaamac Bulaale oo ku magac dheer “Aabi” oo ah nin Magac weyn leh oo aad loo Ixtiraamo ayaa isaguna ka waramay taariikhda iyo facweynida Sandalada uu ka soo jeeddo Suldaan Maxamed, waxaanu hadalkiisii ku soo gunaanaday kaftan aad loogu qoslay.
Intaa ka dib waxaa hadalkii lagu wareejiyey odayaal ku hadlayey magaca beelaha ay ka soo jeedaan ee reer Somaliland/Birmingham oo dhamaantoodba si wanaagsan oo sharaf iyo qadarin leh u soo dhaweeyey Suldaankai. Odayaasha oo ay shucuurtooda ka muuqatay farxad iyo qadarin waxa hadaladoodii munaasabadda u yeeleen qurux iyo qiimo gaar ah.
Odoyaasha ku hadlayey magaca beelaha ay ka soo jeedaan oo aan halkan lagu soo koobi karin waxaa ugu horeeyey mudane Faarax Maxamed Jaamac oo muujiyey soo dhawaynta iyo qadarinta ay u hayaan Suldaanka, waxaanu sheegay in ujeedada ay ka leeyihiin magaca beelaha ay tahay isbarasho iyo in laysku aqoonsado maadaama uu la kulankan Suldaanku yahay kii ugu horeeyey ee Insha Alla kulamada dambe ay Suldaanka ku soo dhawayn doonaan iyaga oo Beesha Birmingham ee Somaliland ah oo hal qof oo dhamaantood ka Wakiil ahi u hadlo.
Markii ay dhamaatay qaybtii odayaashii Suldaanka ku soo dhawaynayey magaca beelahooda ayaa mudane Cabdiraxmaan Saalax oo si maamul wanaagsan leh u daadihinayey barnaamijka uu cod baahiyaha ku soo dhaweeyey Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani oo la wada sugayey qudbaddiisa.
Salaanta Islaamka, duco iyo Mahadnaq balaadhan oo uu soo jeediyey Jaaliyadda Somaliland ee Birmingham ayuu Suldaanku ku bilaabay hadalkiisii. Kaftan yar oo ku saabsan sababta aanu dirayskii looga bartay salaadiinta iyo cumaamaddii u sedan oo yidhi waan ka soo yara fasax qaatay ka dib wuxuu Suldaanku ka xog waramay xaaladda guud ee Somaliland iyo geedi socodkii loo soo maray iyo doorka Salaadiintu ka qaadatay nabadda ay dadka Somaliland ku naaloonayaan. Somaliland in badan ayaan ka sokeeyey, maanta dunida waa tuulo yar oo war iskuma seegana waxaanan filayaa in maanta wararkii u dambeeyey ee Somaliland la socotaan iyo in laga heshiiyey murankii iyo khilaafkii siyaasadda ee jiray markaan soo dhoofayey inkasta oo aan dadkii aan la kulmay maalmahaas oo aad u war warsanaa aan u sheegay inaanay Somaliland wax dhibaato ahi ka dhacayn.
Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani. waxa kale oo uu ka waramay Saamaynta ay abaarihii la soo maray nolosha dadka Miyi iyo Magaalabo ku yeesheen iyo in Ilaahay Raxmaadkiisa ku maansheeyey Somaliland.
Ugu danbayntiina wuxuu Suldaanku kula dardaarmay Reer Birmingham inay isku duubnaadaan oo dalkii hooyo wax soo taraan halkanna wax wada qabsadaan oo aayaha iyo mustaqbalka ubadkooda ka fakiraan ku dheganaadaan diintooda iyo dhaqankoodaba.
« “Dad badan oo ku nool Geeska Afrika ayaa doonaya inay carqaladeeyaan nabadgalyada iyo xasiloonida Somaliland ka jirta “Dr. Kin Howell. Prof: Hussein Hassan Guleed oo loo doortay xubinta golaha dhexe ee Kulmiye u matalaasa Laanta Norway »